हरेक दिनको यो ९० मिनेट हुनेछ अशुभ ! यी समयमा गरेको काम कहिले पनि सफल हुँदैन ! – MeroOnline Khabar
हरेक दिनको यो ९० मिनेट हुनेछ अशुभ ! यी समयमा गरेको काम कहिले पनि सफल हुँदैन !
शास्त्रमा कुनैपनि शुभ कामको शुरुवात गर्नुभन्दा पहिले शुभ मुहूर्त हेर्ने परम्परा रहेको छ । मान्यता अनुसार शुभ मुहूर्तमा काम शुरु गर्नाले काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साथै अशुभ मुहूर्तमा कुनै काम गरियो भने कार्य असफल हुने बिश्वास रहेको छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जब राहुकालको समय चलिरहेको हुन्छ त्यस समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुहुदैन ।
शनि ग्रहपछि दोस्रो अशुभ ग्रह राहूलाई मानिएको छ र यो छाया ग्रहले पनि अशुभ फल प्रदान गर्दछ । ज्योतिषको अनुसार हरेक दिन ९० मिनेटको समय राहुकाल समय हुन्छ र मान्यता अनुसार यस समयमा यदि कुनैपनि शुभकार्य गरिन्छ भने त्यो अशुभ हुने गर्छ । सूर्योदय देखी लिएर सूर्यास्तसम्म आठौं भागको स्वामी राहु हुने गर्छ । हरेक दिनको हिसाबले कुन समयमा लाग्ने गर्दछ राहुकाल? जान्नुहोस् ।
१. सोमवार राहुकालको समय – बिहान ०७:४५ देखी ९:१५ बजेसम्म रहनेछ। २. मंगलवार राहुकालको समय – दिउसो ०३:१५ देखी ०४:४५ बजेसम्म रहनेछ। ३.बुधवार राहुकालको समय – दिउसो १२:१५ देखी ०१:४५ बजेसम्म रहनेछ। ४.बिहिबार राहुकालको समय – दिउसो ०१:४५ देखी ३:१५ बजेसम्म रहनेछ। ५.शुक्रवार राहुकालको समय – बिहान १०:४५ देखी १२:१५ बजेसम्म रहनेछ। ६. शनिवार राहुकालको समय – बिहान ९:१५ देखी १०:४५ बजेसम्म रहनेछ। आइतबार राहुकालको समय – बेलुका ०४:४५ देखी ६:१५ बजेसम्म रहनेछ।
← नेयमारले क्लब छोड्ने संकेतपछि ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गर्ने दौडमा पिएसजी
धादिङमा शुक्रबार दिउँसो पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प →
एउटा अदभुत सत्य घटना टाउको काटेको १८ महिना सम्म कुखुरा बाँचिह्यो
टाउको जोडिएका सबा र पराहले भारतमा छुट्टा छुट्टै मतदान गरे